Iindawo zenkcubeko nezembali | Tyelela uHultsfred
Imekobume yenkcubeko yimeko ephenjelelwe yaza yenziwa ngumntu. Ngale mimandla kunye nezakhiwo, imbali yobomi bomntu yenziwa ibonakale.
Icawa yaseMarlilla-Gårdveda Ngo-1800, iiparishi ezimbini iMålilla kunye neGårdveda zakha iparishi edibeneyo. Oku emva kotyelelo lukabhishophu ngo-1768 xa iicawe zombini zaseMålilla naseGårdveda
Icawa iVena yenye yeecawa ezinkulu zesizwe kwidayosisi yaseLinköping. Ukususela ekuqaleni, icawa yayihlala abantu abaphantse babe li-1200. Emva kokubuyiselwa okumbalwa emva koko izitulo zasuswa
Icawa yaseMörlunda intle kakhulu ngecala elide elibheke e-Emådalen. Icawe yangoku yagqitywa kwi-1840, kodwa kwangoko nge-1329 bekukho icawe kwindawo enye.
IHultfred Church, eyona dolophu inkulu kamasipala, eneneni inecawa encinci. Izicwangciso zokwakha icawe eHultsfred zazikho ixesha elithile kwaye ngo-1921 zenziwa
Icawa yaseVirserum yakhiwe ngesimbo se-neo-Gothic esineempawu zayo eziphezulu kunye neefestile ezibonisa iiarched kunye neefowuni. Icawe yangoku yaseVirserum yakhiwa ngonyaka we-1879-1881. Inkqubo ye-
Umqolomba waseLasse-Maja okanye iStora iLassa Kammare inebali elinomdla lokulixela. Kule mqolomba, abantu kwilali yaseKlövdala babalekela kumaDanes kwi1612
Umda omxinwa weVirserum-edaseda
Fumana amava okukhwela iibhasi zikaloliwe o-orenji otyheli ophefumla ama-50s phakathi kweVirserum ne-Åseda. Yonwabela imeko ye-nostalgia kwaye ube nekofu enesixhenxe
Umkhondo omxinwa uHultsfred-Västervik
I-7 yeekhilomitha ubude kunye ne-891 yeemilimitha ububanzi, isuka kumahlathi aseSmland ngasentshona, amachibi adlulileyo, uluntu oluncinci kunye nezolimo ukuya kwilizwe leziqithi
I-Kungsbron, ebekwe ngu-Emån, yayiyimeko yemfazwe ngo-1612 kwenye yeemfazwe zokuqala zikaGustav II Adolf nxamnye namaDanes. Idabi laseKungsbron E-Kungsbron eJäreda
Icawe yangoku mhlawumbi yeyesithathu kwindawo enye. Xa icawe yokuqala yakhiwa ayaziwa kwaye amaxwebhu abhaliweyo alahlekile kwaphela. Ukuba ibandla
Ngokomxholo, uNils Dacke owenzakeleyo wayefihliwe eDackegrottan kude nemikhosi kaGustav Vasa. UNils Dacke wakhokela abalimi baseSmåland ngexesha lemvukelo ngokuchasene noGustav Vasa. Kunye
Ilitye lesikhumbuzo lika-Oscar Hedström
U-Oscar Hedström wayengomnye wabaseki besithuthuthu saseIndiya. Wayeyinjineli eyintloko. U-Oscar Hedström wakha iprototype yokuqala ngo-1901. Wayelungile njengomyili, nto leyo
IHagelsrums idubula iziko
Iikhilomitha ezintlanu kumantla mpuma eMarlilla, ekuweni kweSilverån yidolophana iHagelsrum. Kukho intsalela yesithando sokugqibela sesithathu kunye nesokugqibela. Isithando somlilo sakhiwa ngo-1748. Ngelo xesha
Kwihlathi elinemihlathi iBjörkmossa kukho umnqamlezo owenziwe ngomthi obhalwe "Ndiyaxoka ndilele kwaye andifi, Nkosi ndixolele ezo zono zandibeka
Imbewu yamaphepha okusila embewu
Ngokwencwadi yeMyuziyam yobuGcisa yonyaka ka-2014, uFröåsa ngoyena mdala ugcinwe eSweden. Ke ngoko, le ndawo ingumdla welizwe. IFröåsa handpappersbruk yayiyeyona ndawo yokuqala kushishino ngo-1802.
UAlbert Engström wayengomnye wabona bantu babalaseleyo kwinkcubeko kwimbali yaseSweden. Wayengumculi, umbhali kunye nekhathuni. UAlbert wazalwa ngoMeyi 12, 1869 kwifama
UFröreda Storegård wenkulungwane ye-1700 yenye yezikhumbuzo zaseKalmar County. Indawo yefama enemeko yayo yokwakha egciniweyo ebonisa ngokucacileyo isimilo selali yaseSmåland ukusuka kwinkulungwane ye-1700
Ingcuka yengcuka eSlättemossa
I-spherical granite lilitye eliqinise kubunzulu obukhulu laze lafikelela kumphezulu ngexesha lokugoba kuqweqwe lomhlaba. ISlättemossa kuphela kwendawo
UMarlilla umasifundisane oomatshini
Indawo yokusebenzela ibisebenza phakathi kwe-1907 kunye ne-1991 kwaye igcinwe inenxalenye yayo kwindawo yayo yangaphakathi. Namhlanje, umbutho woluntu wasekuhlaleni unezifundo zokukhathalela iimoto kwi
Icawe yaseLönneberga imi kakuhle kakhulu, kwinduli evulwa lihlathi, malunga neekhilomitha ezi-6 ukusuka kwidolophu yaseSilverdalen naseLönneberga. Icawe yangoku
Umboniso Rätt & Slätt
Umboniso weRätt & Slätt, yiva uthuli kumawakawaka eebhutsi zokumatsha kwi-moor. Jonga ngeenxa zonke uve ukuba lalikhulu kangakanani ithafa elo. Umboniso ngobomi
Indawo yokungcwaba eLångeruda
Phakathi kweLångeruda kunye ne-Ekeflod ngaphandle nje kweVirserum ngamangcwaba asixhenxe amakhulu e-Iron Age. Indawo yokungcwaba imi kwithafa eliphakathi kweLångeruda kunye neelali zase-Ekeflo kwaye ibandakanya amangcwaba asixhenxe.
Indawo yokungcwaba eJäreda
Indawo yokungcwaba ineziduli ezibini kunye namatye amathathu, awakhiwe ngexesha le-Iron Age. Kwenye yezi nduli kukho ilitye kwaye ngaphezulu nje kweemitha ezimbini ukuphakama kunye nesithathu
E-Blaxhult kukho inqaba yakudala ukusuka kwi-Iron Age kwaye kummango ongezantsi kwentaba kukho iziduli ezine zokungcwaba, indala yazo ivela kwi-Neolithic. Kwelinye lamangcwaba
Kukhunjulwa izehlo zikaNils Dacke kunye noDackefejden, lo mfanekiso wawakhiwe ngo-1956 nguNils Dacke. Umzobi u-Arvid Källström wenza umfanekiso oqingqiweyo ukuze uNils Dacke enze njalo
Björneström kunye neNäcken
Uluntu lwaseBjörneström lube ngumbulelo kwilitye lokusila. Kwakungelo xesha ke apho ifanitshala yeVirserumsbygden yefanitshala yavela kwinkulungwane yokugqibela ye-1800. Umbutho ubonakalisa ukuqala kwenkulungwane.
IGalleri Kopparslagaren, iRallarstugan kunye neGlaspellehuset zezinye zeemeko zenkcubeko nezembali ezixabisekileyo kubumelwane. Kunye neStorgatan kumbindi weHultfred kukho izakhiwo ezinkulu
I-Äspebäcken croft eVenabygden yayisetyenziselwa ukufota i-Soldier nge-Broken Rifle. UCarl Olof Nordenberg wayeneminyaka engama-35 ubudala ukufika kwakhe eVena ngo-1856. Ngo
Umatshini womoya waseDalsebo
I-Dalsebo windmill ibuyiselwe kakuhle kwaye ngoku iqulethe i-museum Ilali yaseDalsebo ibekwe kumhlaba onemihlaba kunye neenkqubo zendlela ezifanayo
Idolophana yaseVisböle engaphazanyiswanga yidolophana eqhelekileyo ukusuka kwindawo yabalimi yenkulungwane ye-1700. Izindlu zokuhlala zazakhiwe njengezindlu ezinkulu ezinemigangatho emibini ezikufutshane kwinduli naphakathi kwazo